Louisiana anya na mbo mbuli ya China ahia - China Yangzhong chioma Star akara
Pushing nka na mmanụ, chemical mmepụta na-achọ iso ụgbọelu na aerospace
Louisiana chọrọ parlay ya na-eme na mmanụ eke gas na chemical mmepụta n'ime gbasaa trading agbatị na China, dị ka ala si n'elu mmepe ukara.
Don Pierson họpụtara odeakwụkwọ nke Louisiana Economic Development mgbe John Bel Edwards ghọrọ gọvanọ na January. Pierson kwuru na steeti na-ezube na-ewu na ya omenala ọrụ - ike na chemical mmepụta, oke ohia na n'ichepụta.
"Anyị na-obi ike nke na-amakụ n'ọdịnihu ohere ụgbọelu na aerospace, IT na mmiri management," o kwuru na N'ajụjụ ọnụ na New York na Tuesday.
Trade n'etiti Louisiana na China a eme ihe iche iche. Ebe ọ bụ na 2008, Louisiana ka họọrọ akpa ke US na kwa n'isi n'isi mba ọzọ kpọmkwem ego, na Chinese ụlọ ọrụ na-egwuri a akụkụ buru ibu.
China bụ nke abụọ-kasị ọṅụ na Louisiana.
China na-anọchi anya Louisiana si n'elu mbupụ ahịa, na ihe karịrị $ 8.6 ijeri na-ebupụ na 2014, ogo Louisiana Nke 4 n'etiti US na-ekwu na-ebupụ na-adịdebeghị mmiri.
Pierson kwuru na e nwere ebe abụọ na-egosi ịbụ karịsịa ekwe ịgbasa ahia n'etiti ala na China. Otu bụ na-amị chemical feedstock ka methanol, nke a chọrọ Nlụpụta chemical ngwaahịa.
Ọzọ na-agụnye mmepụta nke gasị eke gas, ma ọ bụ LNG, nke na-kere mgbe eke gas na-mma na mwepu 259 degrees Fahrenheit.
Na 2014, Louisiana nwetara ihe ulo oru mbo nke $ 1,85 ijeri si Shandong Yuhuang Chemical Co ịzụlite a methanol osisi ke Louisiana si St. James Parish. The owuwu, nke na-atụ anya ka ike 400 na-adịgide adịgide ọrụ na banyere 2,000 nwa oge na-ewu ọrụ, bụ na-ewu.
"Anyị na-atụ anya na ọ ga-abịa na akara na-amalite mmepụta ke 2017," O kwukwara.
Mgbe ala mmanụ eke gas ahịa igbochi obodo si ike mmepụta, ndị ahịa na-a eketịbe maka chemical azụmahịa.
"The dobe na mmanụ ahịa ka kụrụ ụfọdụ ebe nke Louisiana ike, dị ka anyị bụ ọnụ ọgụgụ abụọ emeputa ihe nke mmanụ eke gas na US," kwuru Pierson.
"Ma ala ahịa nwekwara ike ike ohere, ebe ọ bụ na mmanụ na gas bụ feedstock maka chemical mmepụta na na-eji ike na ihe owuwu na manufactures na feedstock."
China si na-eto eto na aku na uba ga-achọ feedstock maka chemical ngwaahịa, na Louisiana si emeri na ebe na Gulf of Mexico ga-eme ka ọ dị mfe maka Chinese sịrị ka mmepụta ke-ekwu na mgbe ụgbọ mmiri ngwaahịa azụ China site na ala si pipeline netwọk ma ọ bụ site na otu nke ya na ọdụ ụgbọ mmiri, kwuru, sị Pierson.
Louisiana n'ọdụ ụgbọ mmiri usoro bụ n'etiti ndị kasị ibu n'ụwa, na 27 deepwater na-emighị emi-draft ọdụ ụgbọ mmiri.